के भा’को ठिटीहरूलाई | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← थला परेको बिबादित संस्था ए एन ए (ANA) लाई उठाउन खोज्ने कार्यकारी बरिस्ठ उपाध्यक्ष हेम पाठकलाई नै थला पार्न खोजिए पछी ए एन ए को भबिस्य अन्यौलमा, टेक्सस सम्मेलन प्रभाबित हुने !
‘केटासँग टङकिस गर्दा फिलिङस आउनु स्वाभाविक हो। केटीसँग टङकिस गर्दा भने फिलिङस आएन, घिन पो लाग्दो रहेछ।’
स्वाभाविक हो, मित्रता भएपछि एक अर्कासँग धेरै कुरा ‘सेयर’ गरिन्छ। त्यसैले चलचित्रको छायांकनका क्रममा उनीहरूले खाना ‘सेयर’ गरे, रुम ‘सेयर’ गरे,बेड पनि ‘सेयर’ गरे होलान्। त्यतिबेलासम्म उनीहरू एकअर्काको ‘रुम पार्टनर’ हुँदै गहिरो साथी भैसकेका थिए। सामान्य कुरा हो कि मित्रता भएपछि उनीहरूले एकअर्कालाई नजिकबाट बुझिसकेका थिए। यहाँसम्म कि उनीहरूलाई एकअर्काको सामु लुगा फेर्न पनि अप्ठेरो लागेन ।
‘हो, हामीले एकअर्कालाई ‘न्युड’ देखेका छौं। केटी-केटी त्यसमा पनि आत्मिय साथी भएपछि त्यसमा अप्ठेरो मान्नु पर्ने कुरा पनि त थिएन।’ सोनियाले यथार्थ बयान गरिन्। त्यसैले होला सोनिया जियाको हिप र स्तन आकर्षक लागेको कुरा बताउन हिच्किचाइनन्। जियालाई पनि सो नियाको ‘स्लिम फिगर’ले लोभ्याएछ। त्यसो भए एकअर्कालाई ‘न्युड’ देख्दा कताकता काउकुति लागेन त ? जियाले भनिन् -‘जुन जवाफ आउला भन्ने लागेर तपाईं प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो जवाफ पाउनुहुन्न। वास्तवमा हामी असाध्यै मिल्ने साथी हौं र त्यसबाहेक हामीबीच अन्य ‘ फिलिङ्स’ छैन।’ यद्यपि उनीहरू एकअर्कासँग कति नजिक छन् भन्ने कुरा साप्ताहिकको स्तम्भ ‘अन्तरकुन्तर कुरा’ मा पुष्टि पनि भैसकेको हो। जियाले भनेकै थिइन-‘बिहान उठ्दा लिंग परिवर्तन भएर सुन्दर युवक भएछु भने म मेरी साथी सोनियासमक्ष बेड सेयर गर्ने प्रस्ताव राख्थे।’ जियाको गोरो र भरिलो जवानी देख्दा जो पनि ‘फिदा’ हुनसक्छन्। सोनियाको रायमा जिया उनीभन्दा सुन्दर छिन्। जिया भने सोनियालाई ‘ स्क्रिन’का लागि बनेकी गुडिया मानिन्छ।
‘नाम होस्, बदनाम होस्, गुमनाम नहोस्’ केही वर्षअघि हास्य अभिनेत्री दिपाश्री निरौलाले भनेको यो वाक्य चलचित्रवृतमा अधिकांशले सार्थक तुल्याइरहेका छन्। पछिल्लो उदाहरण हुन्— सोनिया शर्मा र जिया केसी।
एउटा चलचित्रको केही उत्तेजक दृश्य युट्युबमा राखिएपछि चलचित्र क्षेत्रमा यी दुईको चर्चा चुलिएको छ। यौन उत्तेजक चलचित्र प्रतित हुने उक्त विज्ञापन हेरेर धेरैले युट्युबमा गालीगलौज समेत गरे भने केही चलचित्रकर्मीले त्यस्ता चलचित्रलाई प्रदर्शनको अनुमति नै दिन नहुने भन्दै उजुरीसमेत हाले। यी दुई नायिका तथा अर्की एक नायिकाका कामोत्तेजक दृश्य तथा अश्लिल गालीसहितको उक्त प्रोमो हाल युट्युबबाट हटाइसकिएको छ र निर्माणपक्षले क्षमा माग्दै चलचित्रमा त्यस्तो दृश्य नराख्ने वचनसमेत दिएको छ। वचन पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? पछिको कुरा हो।
इन्टरनेट सञ्जालमा मोडलिङ् तथा मनोरञ्जनका विषय समेटिएको एउटा वेवसाइट छ ‘kathmanducraze.com’। यसको होमपेजमै राखिएको छ नायिका सोनिया र जियाका उत्तेजक तस्बिरहरू, जसलाई क्लिक गर्दा खुल्ने पेजमा राखिएका पाँचवटा सिरिजमा उनीहरूको कामुकता उर्लेर आएको देखिन्छ। यी दुई नायिका ‘सेक्सी’ त छन् नै, ती तस्बिरमा उनीहरू एकअर्काप्रति आशक्ति भाव पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
महिला समलिंगी अर्थात् लेस्वियन कन्सेप्टमा ती तस्बिर खिचाइएको नायिकाद्वय बताउँछन्। ‘लेस्वियनले त्यसरी नै एकअर्कालाई प्रेम गर्छन् कि भन्ने अनुमानमा हामीले ती तस्बिर खिचाएका हौं।’ दुवैले एउटै स्वरमा भने। के महिला समलिंगीहरूले त्यस्तैगरी एकअर्कालाई ‘माया’ गर्लान् त ? त्यो बहस वा खोजीको विषय हुनसक्छ, तर सोनिया र जियाको हाउभाउ हेर्दा लाग्छ, उनीहरू सधैं त्यसरी नै ‘माया’ साटासाट गर्छन् कि ?
‘छ्या, हामी त्यस्ता होइनौं। त्यो त तस्बिर खिच्न गरिएको अभिनय मात्र हो। त्यसलाई अभिनय नै भनेर बुझ्नु होला।’- जियाले भनिन्। झापाकी जिया केसीलाई निर्देशक दीपक श्रेष्ठले ‘डेब्यु’ गराएका हुन्। उनले आधा दर्जनजति चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। काभ्रेकी सोनिया शमार् ले मोडलिङ गर्दै विवादास्पद एक चलचित्रमा पहिलो पटक नायिका हुने अवसर पाएकी हुन्। ‘मलाई त पहिलो गाँसमै ढुंगा जस्तो भयो। विचारै नगरी ‘र फुटेज’ युट्यु्बमा हालिएपछि आफन्त तथा साथीहरूले गाली गरिरहेका छन्।’ सोनियाले भनिन्- जिया पनि उनको कुरामा सहमत छिन्।
त्यही चलचित्रको छायांकनका क्रममा तीन महिनाअघि यी दुई नायिकाको परिचय भयो। परिचय गहिरो मित्रतामा परिणत हुन समय लागेन। यतिसम्म कि मिडियाहरूमा उनीहरूले आफ्नो आत्मिय मित्रका रूपमा एकअर्काको नाम लिन थाले। निस्वार्थ मित्रता गरेको बताउने जिया र सोनियाले वेबसाइटका लागि तस्बिर खिचाउने क्रममा फरक ढंगको ‘ग्ल्यामर’ पस्कने निधो गरेपछि एकअर्का प्रति आशक्त भएको झल्को दिने तस्बिर खिचाए।
कुनै बखत लेस्बियनले जस्तै गरुँ भन्ने भावना आएन ?
सोनियाः मन नभएको कुरा गर्ने चाह हुँदैन।
जियाः समाजमा त्यस्ता मानिसहरू छन् भन्दैमा हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ र ?
एकअर्कालाई ‘न्युड’ देख्दा नि ?
सोनियाः लुगा फेर्दाको अवस्थामा अनायसै हेरियो, तर नराम्रो सेन्सले हेरिएन। यति मात्र थाहा छ कि उनी सेक्सी छिन्। जियाले जसलाई पनि आकषिर्त तुल्याउन सक्छिन्।
जियाः होस्टलमा बस्दा एक समलिंगी युवतीले प्रस्ताव राखेकी थिइन्। उनी राम्री पनि थिइन्। म भित्र त्यस्तो भावना भएको भए अहिले म पनि उनी जस्तै हुन्थे होला नि।
कस्तो हुँदो रहेछ, युवतीसँगै किस गर्दाको अनुभव ?
सोनियाः अनकम्फर्टेबल, धेरै गाह्रो भयो।
जियाः एकैछिनको कुरा थियो। त्यसैले यादै भएन।
तस्बिर खिच्दा लाज लागेन ?
सोनियाः मैले भनिसके लाजभन्दा पनि मलाई ‘अड फिल’ भयो।
जियाः अप्ठेरोचाहिँ हुँदो रहेछ। म अभिनय गरिरहेकी थिएँ, त्यसैले लाज चाहिँ लागेन।
वेबसाइट काठमाडौंक्रेज डटकमका सञ्चालक तथा फोटोग्राफर कविन्द्रमान शाक्यले जिया र सोनियाको ‘लेस्बियन कन्सेप्ट’का यी तस्बिर करिब एक महिनाअघि खिचेका हुन्। तस्बिर खिच्दाको रमाइलो अनुभूति उनले साप्ताहिकसँग यसरी साटेः
पश्चिमा मुलुकका वेबसाइट तथा पत्रपत्रिकाहरूमा ‘लेस्बियन कन्सेप्ट’का तस्बिरहरू देखेको थिएँ। ग्ल्यामरस तस्बिर खिच्ने क्रममा मलाई पनि त्यस्ता तस्बिर खिच्ने मन थियो। जियालाई उक्त कुरा बताएपछि उनले सोनियालाई लिएर आइन् र हामीले ती तस्बिर खिच्यौं। तस्बिर खिच्दा दुवै जना प्रोफेसनल कलाकारले जस्तै समलिंगीको अभिनय गरिरहे। मैले क्यामेरा ‘क्लिक-क्लिक’ गरिरहेँ। एकअर्कासँग अंकमाल गरेर, टाँसिएर तस्बिर खिच्दा खासै अप्ठेरो भएन, तर चुम्बन गर्दा भने उनीहरूले अप्ठेरो मान्लान भन्ने डर थियो। चुम्बन गर्दा पनि उनीहरूले अप्ठेरो माने नन्। उनीहरूले निर्धक्क चुम्बन गरिरहे र सहजै ती तस्बिर क्यामेरामा कैद गरियो। ती तस्बिर वेबसाइटमा राखिएपछि धेरैजसो व्यक्तिले त्यसलाई स्वाभाविक तर नौलो मानेका छन्। समलिंगीहरूका समाचारले यहाँ राम्रो स्थान पाइरहेका छन्। उनीहरूको क्रियाकलापलाई समाज र कानुनले पचाइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यस्ता तस्बिर खिच्नु नौलो भए पनि त्यसलाई मैले समाजकै एउटा पाटो मानेको छु। जसलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं।
जहाँसम्म आफ्नो अघिल्तिर दुई युवतीको आशक्तिपूर्ण भाव हेर्दैं तस्बिर खिच्दा आउने फिलिङ्सको कुरा छ, तस्बिर खिच्दा स्टुडियोमा मे कअपम्यान तथा सहायकहरू पनि थिए, म एक्लै थिइनँ। फेरि म कसरी राम्रो तस्बिर खिच्ने कुरामा केन्दि्रत थिएँ। उनीहरूको भावले मलाई कुनै असर गरेन र गर्नु पनि हुँदैन।
Source : Saptahik